NRVNA | Coinfalls ကာစီနို
NRVNA တစ်လျှောက်လုံးဖျော်ဖြေလိမ့်မည်သည့်မြတ်သောနေရာနှင့်အချိန်-based ဆောင်ပုဒ်ကိုအသုံးပြုသည်. ဒါဟာပါဝင်ပါသည် 30 paylines နှင့်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း. အဆိုပါသည်မှာထိုမှဂိမ်းကိုသင်အကြိမ်ကြိမ်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းလည်စေမည်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောသင်္ကေတများဂိမ်းထဲမှာသင်ထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောင်းကစားရုံမှာပျော်စရာအဘို့ကစားရန်မမေ့မလြော့ပါဒီဂိမ်းမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအထိ£ 50,00 တစ်ခုငွေပမာဏ depositing အားဖြင့် Coinfalls ကာစီနိုမှာအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်တစ်ဦးရနိုင် 200% ဆုကြေးငွေကိုတက်ကိုက်ညီ.
NetEnt ထိပ်တန်းထစ်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အသက်ရှုမှားနောက်ခံတေးဂီတရှိပါတယ်သောဤစိတ်ကူးရက်ကြောင့်မှားယွင်းဂိမ်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်. NetEnt အရည်အသွေးပေါ်မြင့်မားနေသောဂန္ slot နှစ်ခုနှင့်လောင်းကစားရုံဂိမ်းဒီဇိုင်းခဲ့ပြီးဒီသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်.
NRVNA တို့သည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဖန်တီးလိမ့်မည်သည့်ခမ်းနားဆောင်ပုဒ်ရှိပြီးဒီဂိမ်းရဲ့လှည့်ခြင်းများရှိအောင်လှပသောများမှာ. A coin size from 0.01p to £150.00 can be fixed in this game.
NRVNA ကဲ့သို့သောအခြေစိုက်စခန်းသင်္ကေတကိုအသုံးပြုသည် 10, J ကို, တစ်ဦးက, K သည်, နှင့်မေးသငျသညျ x125 မှတက်၏တိုးပွားစေဆပ်ဖို့.
တစ်လေးအရွက် Clover ရဲ့ဒီဂိမ်း comprise အတွက်အဓိကသင်္ကေတများ, မြင်းသံခွါ, ချယ်ရီ, ခုနစ်လီ, နှင့်ခေါင်းလောင်းထိုး. ဤရွေ့ကားသင်္ကေတများ x2 ရန်သင့်အားဖွင့်တဲ့စိတ်ကူးမြှောက်ကိန်းပေးဆောင်နိုင်, 000. အဆိုပါဂိမ်းကြဲဖြန့်လိုဂိုမှတပါးရက်ကြောင့်မှားယွင်းပေါ်မှာရှိသမျှသောရုပ်တုဆင်းတု substitutes ရသောပန်းရောင်ပူဖောင်းအတွင်းအဖြူရောင်ကြယ်ပွင့်များ၏ရိုင်းသောသင်္ကေတကိုအသုံးပြုသည်.
အဆိုပါကြဲဖြန့်လိုဂိုလိမ္မော်ရောင်ပူဖောင်းအတွက်ထုပ်အဖြူရောင်စိန်နှင့်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ feature ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်. သငျသညျပုံရိပ်တွေကြဲသုံးခုတူညီသင်္ကေတများပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့လျှင်သင်မှတက်အနိုင်ရနိုင် 10 အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးလေးဖြန့်ကြဲသငျသညျရလိမ့်မည် 15 အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီး5အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေသင်အနိုင်ရလိမ့်မည် 30 လှည့်ခြင်းများ.
အခမဲ့လှည့်ခြင်းများသင်နှင့်အတူတစ်လျှောက် x10 တစ်မြှောက်ကိန်းအရအဘယ်မှာရှိ NRVNA ဘီး feature ကိုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည် spinning နေချိန်မှာ2အပိုအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. ဒီဂိမ်းလည်းသင်အလိုအလြောကျပိုကြီးကိုအနိုင်ပေးဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်သည့်လည်ရန်အရက်ကြောင့်မှားယွင်းသတ်မှတ်နိုင်သည်ဘယ်မှာတခု Autoplay ကို mode ကိုရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်ပြန်ထိုင်နှင့်အနားယူ. ဒါဟာတစ်အလွ RTP ဆွဲဆောင် 96.60%.
NRVNA ပျော်စရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးပေးကတိပေးထားတယ်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်အခြေစိုက်ဗီဒီယို slot ကဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျ slot နှစ်ခုတစ်ဦးကိုနှစ်သက်ကြပြီးတစ်ဦးတောက်ပ slot ကဂိမ်းကိုရှာဖွေနေခဲ့လျှင်ဖြစ်လျှင်ဤသူသည်သင်တို့စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်. တစ်ထူးချွန်ကြိုဆိုအထုပ်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောင်းကစားရုံမှာအခမဲ့ Register 200% £ 50.00.Hurry အထိယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လောင်းကစားရုံပူးပေါင်းသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်!